Ilduuf Iyo Mooganaantii Ugu Weynayd Taariikhda Ee Lughaya Iyo Baki !! Qor1aad Dr.Khadar-Libaaxley. | Hangool News
siday ku dhacday in bali-gubadle oo tirada dadka iska diwaangaliyey yihiin 14,757 Buuhoodle oo tirada dadkii iska diwaan galiyey yihiin
siday ku dhacday in bali-gubadle oo tirada dadka iska diwaangaliyey yihiin 14,757 Buuhoodle oo tirada dadkii iska diwaan
galiyey yihiin 9,933. taleex oo tirada dadka iska diwaan galiyey yihiin 5,145 iyo Badhan oo tirada dadka iska diwangaliyey yihiin 4,625 ay noqdaan GOBOLO JIRA oo shaqeeya oo aasaasiyaadkii gobolnimo dhismihiisu u socdo??!! halka LUGHAYA oo lixgoobood ka xanibantahay dadkeeda haleelay diwaangalintu yihiin 15,185 iyo BAKI dadkeeda haleelay diwaanglintu yihiin 14,830 ay ahaadaan 2dan degmo , degmooyin aan gobolnimo gaadhin wali ??!!
Gobolkii maroodi jeex gobolnimadiisii degmada hargaisa iyo intay xukunto oo kaliya ayaa ku hadhay gobolnimadiisii waayo 3diisii degmo ee ( Hargaisa- Berbera- iyo gabiley ) gobolo ayey noqdeen iyo waliba baligudadle oo aan degmooyinkii hore kujiririn oo iyadna gobol cusub noqotay !! maxaa AWDAL isku raray ee ay dusha iskaga saarantahay wali gobolka salal marka laga yimaado ??!
Gobolkii togdheer gobolnimadiisii degmda Burco iyo inta ay xukunto oo kaliya ayaa ku hadhay gobolnimadii togdheer waayo ( oodweyne , Buuhoodle ) gobolo noqdeen!, degmada sheekh waxa ay ka mid noqotay gobolka saaxil ! maxaa AWDAL isku raray ee ay dusha iskaga saarantahay marka gobolka salal laga yimaado ??!
Gobolka sool laascaanood iyo xudun ayaa ku hadhay gobolnimadii sool halka ( caynaba iyo taleex oo sool ka tirsanaa ay gobolo isku badaleen) maxaa AWDAL isku raray ee ay dusha iskaga saarantahay marka gobolka salal laga yimaado ??
waa degmo qani ku ah silsilada buuraha waaweyn ee macdanta dunida qaaliga ku ah ee ( barilium ama emirol-ka loo yaqaano) qodisteeda iyo soosaaristeeduna qiimo sare kor ugu qaadi karto nolosha bulshada iyo dhaqaalaha dalka ; albaab furana u noqonkarta xidhiidhka somaliland la leedahay dunida inteeda kale.
waa degmo durduro badan leh oo horey iyo imikaba caan iyo hodan ku ahayd waxsoosaarka beer-biyoodka looyaqaan ( crop cash) oo dakhli badan u abuura dadka deegaanka iyo guud ahaan somaliland.
Lughaya : waa deegaan xeeb dheer leh si buuxda isku bixin kara !! badi dadka reer lughaya waxa noloshooda iyo dhaqaalaheedu ku tiirsanyahay bada iyo kaluumaysi ,marka la eego halbeegii gumaystayaashii reer yurub ku bixin jireen ruqsada wadan buuxa marka laga yimaado danahooga gaarka ah; waxa ugu mudneyd in ( baaxda dhul ee dal la siin karaa inta ugu yarba ha noqotee in uu shardiga koowaad bad ay wax u soo maraan leeyahay, tani waa sababta wadamada dunida ugu yar-yar ee gumaystayaashu bixiyeen ay dhamaantood bad u leeyihiin, oo uu ka mid yahay dalka dunida ugu yar VATICAN CITY oo baaxad dhuleedkiisu yahay 0.2 square miles .)
Maxay tahay faa’idada ku jirta gobol noqoshada Baki iyo Lughaya ??
Meelo lamid ah amaba ka yar degmooyinka Baki iyo lughaya horey wadamada dariska iyo dunidaba gobolo ama wadamo ma yihiin imika ??
yaa laga rabaa in ay raadiyaan xuquuqda gobolnimo ee Baki iyo lughaya ??